दैनिकी अनेक बर्ष ८०, पाउँदिनन् खान बसी
पुष २, २०७८ निलम पंत
जाडो महिना । जो कोहिलाई पनि यो समयमा निद्राबाट ब्यूझिन गाह्रो पर्छ । तर आठ दशक पार गरिसकेकी भगवतीको भने दैनिकी सुरु भैसक्छ । उनलाई न त शिशिरको कठ्याङ्गिदो जाडोेले रोक्छ । नत बसन्तको पारिलो रापले । उनी सबेरै उठ्छिन् बिहानीको नित्यकर्म सकेर उनी पापडका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न वीरगंज महानगरको वडा नं. ५ रेशमकोठी पुग्छिन् । भmोलाभरी पापडका लागि आवश्यक सामान बोकेर घर फर्किन्छिन र पापड बनाउन थालिहाल्छिन् ।
वृद्ध भएपछि पनि आफ्नो जीविका निर्वाहका लागि काम गर्ने व्यक्ति विरलै भेटिन्छन् । तर भगवतीका लागि पापड अचार लगायतका सामान बनाउने र बिक्री गर्न घर घर हिड्ने दैनिकीले छोडेको छैन । भारतको मजफपुरमा जन्मिएकी भगवतीको १२ वषको कलिलो उमेरमै विवाह भएको बताइन् । दुई छोरा र एक छोरी गरी तीन सन्तानकी आमा उनी अहिले उनकी छोरी भन्दा धेरै टाढा छन् । ४ दशक पहिले उनले आफ्नो श्रीमान्लाई गुमाए पछि उनको जीवनमा दुःखले लगातार पिछा डोडेन र दुई छोराहरुले पनि संसार छाडेको पनि उनले विगत सम्झदै भनिन् ।
नेपालमा भने १८ बर्ष पहिले आएको उनले बताइन् । वीरगंजकै एक व्यापारीले उनलाई यहाँ बोलाएका थिए । व्यापारकै शिलशिलामा मोजफ्पुर पुगेका गिरीधारी लाठले उनको पापडको स्वाद मन पराएर उनीले वीरगन्जमा बोलाएको उनले खुलासा गरिन् । पछि ती व्यापारीको पनि निधन भएपछि पुरानो कामलाई उनले भने थाँती राखेकी छैनन् । घरमा आफ्नी आमाले पापड बनाउँदा देखेको र आफूले पनि त्यसरी नै सिकेको बताउने भगवती ८० औं बसन्त पार गर्दासम्म पापडकै पछि परिरहेकी छन् । उनको आफ्नो भन्ने त्यही एक छोरी भए पनि कहाँ छन् त्यो समेत भगवतीलाई एकिन थाहा छैन । जीवनको अन्तिम सहासा हुनु पर्ने छोरी पनि नभएपछि उनी सहारा बिहिन रहेको उनले तर्क गरिन् ।
“मर्दाना लोग अप्ने परिवारके लिए कमा सक्ते है तो हम खुदका अप्ना पेट के लिए कमारहे है’ उनले भनिन् । मुझे भि कुछ करना चाहिए वहि तो कररहा हुँ उनले हिन्दीमा नै भनिन् । नेपालमा बस्दै आएपछि उनी नेपाली भाषामा कुरा गर्न सक्दिनन् । अहिले वीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं. १३ स्थित तेजारथ टोलमा बस्दै आएकी असी लागेकी भगवती अग्रवाल हातखुट्टा चल्दा र बिरामी नपर्दासम्म कामबाट विश्राम नलिने बताउँछिन् ।
शुक्रवार, पुष २, २०७८, ०१:१२:००
पुष ६, २०७८ निलम पंत
पुष ४, २०७८ निलम पंत